Ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny After Effects | Famoronana an-tserasera
En Aorian'ny effets dia tsy ny logo ihany no azonao atao. Misy tetikasa tsy tambo isaina azonao omena famaranana tokana izay tsy afahanao mandalo amin'ity programa ity.
Fa ahoana ny fomba fanaovana sary famantarana amin'ny After Effects? Inona ity programa ity? Raha manontany tena ianao dia omenay anao ny lakile mba hahafahanao manamboatra iray.
1 Inona no After effects
2 Fa ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny After Effects?
2.1 Omano ny rakitra logo
2.2 Ampidiro ao amin'ny After Effects ny sary famantarana
2.3 Miaraha miasa
2.4 Manaingo amin'ny zana-kazo
2.5 Manaingo amin'ny sosona endrika
2.6 Amboary ny fotoana iainana sary mihetsika
2.7 Alefaso ny sary mihetsika
3 Ny tolo-kevitray tsara indrindra
Inona no After effects
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatrao alohan'ny handefasana ity lesona ity dia ny hoe After Effects dia ilay programa ampiasainay. Raha efa napetrakao io dia azo antoka fa fantatrao tsara hoe inona ny fampiasana nomena azy, fa raha tsy toa izany ary henonao fotsiny ny momba azy dia mahaliana anao izany.
After Effects dia tena a Fampiharana sary matihanina ampiasaina hamoronana sary, horonan-tsary, sns. mihetsika izany ary misy fiatraikany manokana. Raha atao teny hafa, dia ampiasaina hanamboarana endrika miaraka amina hetsika.
Amin'ny tranga fampiasana After Effects ho an'ny logo dia hahita valiny mahaliana kokoa ianao, satria io logo io dia hisy vokany manokana (hamirapiratra, hihetsika izy, sns.), Zavatra izay, amin'ny tranga hafa, tsy azo atao.
Ary tsara izany? Raha raisina ho 3 segondra fotsiny izao ny sain'ny olona amin'ny Internet (sy ny tambajotra sosialy), ny zava-misy amin'ny famoronana endrika afaka manova endrika na mihetsika, misy vokany manokana, dia hahasarika kokoa azy io.
Fa ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny After Effects?
Tsy mora ny mahita olona manokan-tena manokana amin'ity programa ity. Ny hoe mandoa izany ary tsy mora ampiasaina ihany koa raha tsy manana fahalalana taloha (na dia miaraka amin'ireo fampianarana hitanao amin'ny Internet aza) dia midika fa tsy betsaka ny natomboka.
Fa raha tsy manahy momba ny fotoana hatokanao ianao ary maniry valiny maoderina ary ambonin'izay rehetra misy fiatraikany dia tokony andramanao izany. Ho fanampin'izay, avelanay anao ity fampianarana ity mba tsy hanananao olana.
ny dingana tsy maintsy raisinao After Effects ho an'ny sary famantarana Izy ireo dia:
Omano ny rakitra logo
Maninona izahay no miresaka momba ny sary famantarana iray raha ny tena tianao hatao ao aorian'ny After Effects dia sary famantarana? Eny, satria ny programa mihitsy no mila fototra hahafahana mamelona. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila mamorona sary mialoha ianao alohan'ny handalovanao ireo "fitaovana mazika" an'ny AE ary hampiaina azy io.
Mba hanaovana izany dia amporisihanay izany mampiasa Adobe Illustrator na programa fanovana sary hafa na famolavolana logo. Mazava ho azy, tsy maintsy ataonao izay hahazoana antoka fa ny endriny dia endrika endrika vector, satria io dia hahafahanao manova ny sary sy izay rehetra ao aminy nefa tsy manary kalitao. Ary koa, tokony apetrakao amin'ny loko RGB fa tsy CMYK.
Ampidiro ao amin'ny After Effects ny sary famantarana
Izao dia efa vita ny sary famantarana (tsara, ny fototra fotsiny), fotoana izao hanombohana ilay programa. Raha te hanao izany dia sokafy aorian'ny effets Amin'ny voalohany dia mahazatra be fa, raha mbola tsy nampiasa azy io ianao, na kely dia kely, dia manaloka anao kely, fa avy eo mora ampiasaina.
Ny tokony hataonao dia ny manafatra ny sary famantarana. Mba hanaovana izany, mandehana any File / Import / File. Hiseho eo ny lahatahiry anao, mankanesa any amin'izay anananao sary famantarana, safidio ary sokafy. Ary dia izay.
Handeha hiasa amin'ilay rakitra izahay. Mba hanaovana izany dia hanadino, hanitsy ary hampihatra sary mihetsika ianao, ary hataonao araka ny tianao ho tratrarina miaraka amin'ny sary famantarana. Mazava ho azy, tadidio fa ny sary mihetsika logo dia tsy tokony haharitra mihoatra ny dimy segondra, ary midika izany fa tsy mila manao firaketana maro ianao.
Marina fa amin'ny fotoana voalohany andanianao fotoana be dia be (mandritra ny dimy segondra) fa rehefa vitanao imbetsaka dia hahena kokoa izany fotoana izany.
Ohatra, Raha te-hanana fiaviany tsotra ianao dia mila tsindrio fotsiny eo amin'ny tontonana fitendry ary misafidy Vaovao / Solid. Raha fotsy ny sary famantarana anao dia afaka mametraka ambadika mainty ianao, saingy azonao atao tsara ny mametraka loko tianao.
Avy eo, omenao anarana ilay loko ary tsindrio Make Comp Size. Manome Ok ianao ary tokony hisintona ny sary famantarana anao avy eo amin'ny tontonana tetikasa mankany amin'ny fizotry ny fotoana. Amin'izany no ahitanao topy maso ny fijeriny. Raha ny ao ambadika fotsiny no hitanao dia mila mifanakalo ireo sosona ianao mba ho hita aloha ny anao (ny sary famantarana).
Tetika iray tena mahomby ho an'ny After Effects dia ny mivadika ho any anaty sosona sosona (azonao atao izany amin'ny bokotra havanana amin'ny fisie logo (ao amin'ny tontonana misy ny famoronana) ary Mamorona / Mamadika ho Layered Comp).
Manaingo amin'ny zana-kazo
Aorian'ny effets, ary fandaharana sarimiaina marobe hafa, miasa miaraka amin'ny frame. Izy ireo dia toy ny karazana marika izay mamaritra fotoana mety hanombohana sy hamaranana ny sarimiaina.
Ny iray tena tsotra azonao atao eto dia ny fisehoana miandalana. Ny sisa ataonao dia ny mifantoka amin'ny opacity, izay ho 100% satria hita tanteraka ilay sary famantarana. Na izany aza, raha tsindrio ny bokotra fiatoana famantaranandro eo akaikin'ny bokotra Opacity dia hahita marika ianao izay ahafahanao mametraka fe-potoana, hisehoana ary hanjavona amin'ny fomba mavitrika. Ohatra, manana ny fiovan'ny opacity ao anatin'ny roa segondra hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 100%.
Misy fomba maro hafa hamelomana ny endriny, mila mahita ilay tianao indrindra ianao ary mampihatra azy.
Manaingo amin'ny sosona endrika
Safidy iray hafa hamelomana (izay azo ampifandraisina amin'ilay teo aloha) dia ny sarimiaina miaraka amina endrika. Somary mandroso kokoa io, fa mamela anao mamorona valiny matihanina sy mahaliana kokoa, ka tsy hevitra ratsy ny mijery an'io. Ohatra, azonao atao ny mahazo ilay lahatsoratra hisintona ny tenany, ny lelafo na ny ranomandry maniry avy ao aminy, sns.
Amboary ny fotoana iainana sary mihetsika
Araka ny efa nolazainay taminareo teo aloha, ny fampakarana sary famantarana iray dia tsy tokony ho dimy segondra. Saingy, amin'izany fotoana izany dia mila ireo voalaza etsy ambony rehetra ianao hiasa, ary avelao amin'izay dia avelao hita mazava ny sary famantarana ary azony tsara izay tiany hambara. Noho izany, araka izay azo atao, tsara kokoa ny tsy mampiakatra azy io.
Mitadiava fahatsorana ary, avy eo, manomeza zavatra izay manatsara ny votoatin'ny logo. Tsy misy intsony.
Alefaso ny sary mihetsika
Raha vantany vao vita ianao dia hanana ny sary famantarana sarimiaina, ary tsy mila misintona azy fotsiny ianao.
Mba hanaovana izany, dia ampirisihinay handeha amin'ny filaharana File / Export / Add to Adobe Media Encoder ianao. Araka izany, hanananao izany amin'ny rakitra mp4. Raha mila izany amin'ny GIF ianao dia mila mankany amin'ny efijery Media Encoder ary mifantina izany endrika izany.
Ny tolo-kevitray tsara indrindra
After Effects dia programa iray ahafahanao mahazo valiny lehibe. Fa mila manao fikarohana be ianao. Raha te-hanao sary famantarana tsotra ianao dia manana lesona an-tsary izay afaka manampy anao hanaraka azy ireo. Azonao atao mihitsy aza atambaro izy ireo arakaraka ny vokatra tianao ho tratrarina.
Sahy manao logo miaraka amin'ny After Effects ve ianao? Angamba zavatra maniry fatratra toy ny tranofiara?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny After Effects
Indesign: ho an'ny inona izy io?